Liiska Macalimiinta Cusub ee laga Xiiseenayo Kooxda Newscastle United | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Liiska Macalimiinta Cusub ee laga Xiiseenayo Kooxda Newscastle United
Milkiilayaasha cusub ee Newcastle United ayaa lagu soo waramayaa inay bartilmaameedsadeen Lucien Favre , Brendan Rodgers iyo Steven Gerrard si ay u noqdaan bedelka macallinka hadda ee Steve Bruce .
Ka dib markii ay si guul leh ula wareegeen xulufada uu Sacuudigu hoggaaminayo khamiistii, wararka xanta ah ayaa durbadiiba bilaabay bixitaanka Bruce.
Sida laga soo xigtay Daily Mail , Amanda Staveley iyo la -taliyayaasheeda ayaa hadda ka fiirsanaya Lucien Favre, maamulaha Rangers Steven Gerrard iyo tababaraha Leicester City Brendan Rodgers si ay u noqdaan beddelka macquulka ah ee St. James ‘Park.
Favre wuxuu ahaa shaqo la’aan tan iyo markii uu ka tagay Borussia Dortmund bishii Diseembar 2020, halka Gerrard uu hadda ku lug leeyahay difaacashada horyaalka ka dib markii uu ku dhiirrigeliyay Rangers inay ku guuleystaan ​​Horyaalka Scottish -ka markii ugu horreysay muddo 10 sano ah xilli ciyaareedkii hore.
Rodgers ayaa hogaaminaya kooxda ku ciyaarta King Power Stadium, iyadoo Foxes ay hadda fadhiso booska 13-aad ee Premier League, laakiin, ka dib markii uu ka faa’ideystay labadii xilli ciyaareed ee u dambeysay, wuxuu gaaray isku xigxiga kaalinta shanaad oo isku xigta wuxuuna ku guuleystay FA Cup xilli ciyaareedkii hore , Tababaraha Waqooyiga Irish waxaa Newcastle u arka ikhtiyaar soo jiidasho leh.
Iyaga oo aan wax guul ah gaarin todobadii kulan ee furitaanka horyaalka ee xilli ciyaareedkan, Magpies ayaa ku jirta kaalinta 19 -aad ee kala sareynta iyagoo leh kaliya 3 dhibcood.
Previous articleChelsea oo si weyn ugu kalsoon inay dib ula soo saxiixaneyso Eden Hazard
Next articleCulimada Soomaalida Kenya oo digniin culus kasoo saaray natiijada dacwada badda
Muqdisho (Caasimada Online) – Sida ay Caasimada Online u xaqiijiyeen ilo-wareedyo kala duwan, Madaxweyne Farmaajo ayaa siyaasiyinta Abgaal ee taageersan maamulkiisa islamarkaana lagu sheegay...
Gudoomiyaha Tottenham Daniel Levy oo qorshaha ugu jirin inuu ceyriyo Nuno...